Ukudlwengula yintlobo yonyaka yentsapho yase-cruciferous, isetyenzisiwe njengesityalo se-oilseed and forage. Ukudlwengulwa kwaziwa ngo-4 iminyaka eyi-BC. e. Abaphandi banxamnye nelizwe lokuphanga. Ezinye izazinzulu zikholelwa ukuba indawo yokuzalwa kwesi sityalo yiYurophu, ebizwa ngeBritani, eNetherlands, eSweden. Abanye abaphandi bakholelwa ukuba ukudlwengulwa kwasekuqaleni kuvela kwiMeditera. Ngenxa yoko isityalo esiphucukileyo sishiye eIndiya, apho isityalo sonyaka siye sahlonywa ukususela kumaxesha amandulo. Kungenzeka ukuba, udlwengulo lwaziswa eNdiya ngamaColonizers aseDatshi naseNgesi.
Imbewu yokudlwengula iqulethe i-35-50% ye-fat, i-5-7% yefiber kunye ne-18-31% yamaprotheni, efanelekileyo ngokulinganayo ngama-amino acids. Esi sityalo ngokwemveliso yamanqatha kunye neeprotheyini idlula i-soya kwaye ngenye indlela nge-sunflower kunye nesardard.
Okwangoku, imarike igcwele amafutha anetywayo, ngoko ke iinzame zenziwa ekungasetyenziswanga kokutya. Namhlanje, izityalo zityalo zizama ukuvelisa i-fuel fuel, okuyimfuneko, umzekelo, kwiindawo ezikumantla. Ioli yokuphanga ingasetyenziselwa le njongo. Ukongezelela, isenokusetyenziswa ukuthutha izithuthi. Akuyiyo inetyhefu, ngoko ke inokubuyisela ngokupheleleyo indawo yepetroli.
Ukudlwengula kusetyenziswa njengesivuno sesitshalo. Isetyenziselwa i-haylage kunye nobunzima obuhlaza, kunye nomgubo ococekileyo kunye nezinye izityalo, kunye nefomu ecocekileyo. Esi sityalo sisityalo senkomo (iinkomo, iigusha, njl). Udlwengulo lukhula ngokukhawuleza kwaye luqukethe inani elikhulu leprotheni, elinesulfure. Kwizityalo zokudlwengulwa, izimvu ziveliswa ngokukodwa, kuba oku kunceda ukunciphisa iziganeko zeenkomo ezincinci kunye nokwandisa isivuno sempahla / uboya. Ukususela kwimimandla yokudlwengulwa, iinyosi ziqokelela i-80-90 kilogram zezinyosi (1 ha).
Emva kokucubungula imbewu ye-rapeseed, ioli egcweleyo kunye nomxholo omkhulu weprotheni iyatholakala. Iprotheni yale sityalo ifana nokubunjwa kwiprotheni, i-soy, ibhotela leenkomo, ubisi kunye namaqanda.
Ioli ye-Rapeseed idume ngokubaluleka kwayo kwaye ngoko kukho imfuno kuyo yonke ihlabathi. Kwimarike yehlabathi, eli li-oli liphezulu ezintlanu ngexabiso lokungeniswa kwamanye amazwe nokuthunyelwa kwamanye amazwe, indawo yesine. Yesibili kuphela kwamasundu, i-soybean kunye neoli yelanga.
Namhlanje, isityalo sokudlwengula sonyaka sihlakulwa kumazwe ahlukeneyo ehlabathini, ngokukodwa njengesiqhamo samafutha. Ioli yeCanola efunyenwe kwimbewu ehlaziwayo isetyenziselwa ukutya kumazwe amaninzi ehlabathi.
Ngokwakheko, i-rapese iquka umlinganiselo omkhulu wama-acids amanqatha, kubalulekile ekulawuleni i-metabolism ye-fat. Oku kugqiba iimpawu zokuphilisa ioli. Ngaloo ndlela, ioli ye-rapeseed inceda ukunciphisa i-cholesterol kunye nokuthintela amathuba okubunjwa kwe-thrombus kunye nezinye izifo. Ezi zi-acids azifaneki zifumaneke kwiifati zemvelaphi yezilwanyana. Oogqirha bathi iingqungquthela zeoli ehlaziwayo zikhona izinto ezinqabile ukuxiliswa.
Ngenxa yomxholo we-acucic acid kwi-oli ehlaziyiweyo, isetyenziswe ngokubanzi kwimimandla eyahlukeneyo yoshishino (kwi-metallurgy for hardening of steel, njl.). Ukongeza, ioli, iqhutywe kwi-rapeseed, ayixhatshali kwiqondo eliphantsi, kwaye ngoko isenokusetyenziswa njenge-lubricant injini ze-jet.
Ioli ye-Rapeseed ingasetyenziselwa njengento eqingqiweyo yokuveliswa kwezinto zokhenkcela ngenxa yokukwazi kwayo kwi-160-250 ° C ukudibanisa isulfure kunye nokwenza ubuninzi be-rubbery mass. Ukuveliswa kwe-cellulose / i-furfural, utyani lwesityalo kunye namapheshana amaphepha afanelekileyo. Ioli ye-Rapeseed nayo isetyenziselwa kwiingubo, iikhemikhali, isikhumba, ukushicilela, isepha, izimonyo kunye namashishini apeyinti kunye nama-varnish.
Imbewu yokudlwengulwa idume ngokukodwa kwendalo yamakhemikhali, kuba ihluke kwindlela yokwakhiwa kwezinye izityalo zeoli. Uhlobo oluphambili phakathi kweoli ye-rapese i-erucic acid e-glycerides kunye ne-phospholipids, kunye nokuba khona kwe-glucosides, equle isulfure kwiprotheni inxalenye yembewu. Ukongeza, i-rapeseed iqukethe i-myrosinase enzyme, enokukwazi ukunamathela kwi-thioglucosides.
I-erucic acid content kwi-plant year is 42-52%. Ubukho bayo kwi-rapeseed bunokubhekwa njengento efanelekileyo okanye engafanelekanga kwisityalo. Yonke into incike kwiinjongo zokusetyenziswa-ukutya okanye ubugcisa.
Kukho ubungqina bokuba i-erucic acid ingabangela umphumo ombi emzimbeni womntu kwaye, okokuqala, ekutshintsheni kweepids kwezinye izitho zangaphakathi. Xa besondla ioli ehlambulukileyo yezilwanyana kunye neentaka, babe neenguqu ezitshintshayo kwi-myocardium, umsebenzi ongasebenzi kakuhle, isifo sesibindi. I-thioglycosides yeoli ingabangela ukucaphukiswa kweembrane ze-digestive system, indlela yokuphefumula, ukuphazamiseka komsebenzi oqhelekileyo we-thyroid gland. Ukongeza, i-thioglycosides ibangela izixhobo ezinokutsha.
Izindlela zanamhlanje zokuphatha ukunyuka
Isalathisi - imifuno enomsoco kwaye enempilo
Ureaplasmosis: iimpawu, unyango
Indlela yokuzibeka ngokwakho ngaphandle kwenkcitho engadingekile: Imithetho ye-budget-TOP-4 yobuhle!
I-Seabuckthorn: izakhiwo, zokupheka
Hydrotherapy, isenzo sokwelapha kwamanyathelo amanzi
Luphi uqeqesho olufunekayo kumzimba omhle
Indlela yokupheka iintlanzi ezihlwayekileyo nezincinci
Indlela yokwenza i-massul-cellulite isistim ngeebhanki
Tart nge-asparagus kunye nemon
UPolina Gagarina wabonisa umfanekiso ongenakulinganiswa kwi-bikini
Irayisi e-aromatic kwiibhotile
Ukuvakaliswa kweNtombikazi Enyulukileyo 2016: nini kunye nendlela abayigubha ngayo
Ikhekhe le-walnut cake
I-Toothpaste yabantwana abancinci
Indlela yokubuyisela ifomu elidala emva kokuzala?
I-Focaccia nge thyme kunye negalikhi
Ukuphucula i-gymnastics iQigong
Ukuphulukiswa kunye nemilingo ye-jet
I-Avon teddy bear izokukhumbuza ukubaluleka kweemviwo zebele
Iindlela zokupheka zonyaka omnandi kunye nolula
Uchungechunge oluthi "Kanye kwiTale"